Dardar Galinta Shaqooyinka Dakhliga Ee M.M Qabridahar - Cakaara News
Dardar Galinta Shaqooyinka Dakhliga Ee M.M Qabridahar
Qabridahar( cakaaranews ) Talaado 5ta April 2016, Shir-wayne ay kasooqayb galeen dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida Haweenka, Dhalinyarada iyo cuqaasha islamarkaana lagaga wada hadlayay dardar-galinta iyo wacyi-galinta hawlaha dakhli-uruurinta iyo waliba dakhli-xaraynta ayaa kadhacay Hoolka shirarka ee Maamulka Magaalada Qabridahar.
Hadaba Maareeyaha Wakaalada Dakhliga Maamulka Magaalada Qabridahar mudane Badri Khaalid Nuur oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in shirkan ujeedadiisu tahay in bulshada qaybaheeda kaladuwan ay fahan buuxa kaqaataan hawlaha dakhliga iyo waliba in bulshadu si qodo dheer u ogaato faaiidooyinka Dakhliga. Wuxuuna intaa kudaray masuulku in shirkani uu yahay mid lagaga war bixinayo adeegyada horumarineed ee kajira maamulka magaalada qabridahar isagoo sheegay in horumarka balaadhan ee ka hirgalay deegaanka uu ku yimid dakhliga iyo waliba taageerada bulshada.
dhinaca kale, qaarkamida bulshadii kasooqaybgashay shirka ayaa sheegay in ay aad usoo dhawaynayaan islamarkaana ay taagersanyihiin xoojinta iyo tayaynta dakhliga.
Ugu danabayna wuxuu maareeyuhu u mahadceliyay dhamaan bulshadii ka sooqaybgashay isagoo xusay in bulshada kudhaqan magaalada ay fahan balaadhan kahaystaan kadib markuu arkay fikiradoodii ku aadana hawlaha dakhliga